Semidziyo yekuchenesa imba - yekuchenesa, inoita basa rakakosha, ingangoita mhuri yega yega chishandiso chakakodzera. Vacuum cleaner iri nyore kwazvo kushandisa, asi vanhu vazhinji havadi kuchenesa uye kugadzirisa kweye vacuum cleaner. Ngatidzidzei kuchenesa uye kuchengetedza vacuum cleaner neXiaobian. www.chinApp.Com China brand webhusaiti
1. Chenesa sundries uye guruva rekuunganidza zvishongedzo mubhaketi munguva, suka guruva grid uye bhegi mushure mega basa, tarisa kana paine perforation kana mweya leakage, uye nyatso kuchenesa guruva grid uye bhegi ine sipo uye inopisa mvura, uye furidza dziome. Izvo zvakarambidzwa zvachose kushandisa yakaoma guruva grid uye bhegi.
2. Tarisa kana tambo yemagetsi nepulagi zvakuvara. Mushure mekushandisa, vhara mhepo coil musumbu uye urembedze pachirauro chevhavha yemusoro.
3. Mushure mekumwiswa kwemvura, tarisa iyo inlet yemhepo kuti yakavharika kana marara, zvikasadaro chenesa uye tarisa iyo inoyerera wave kuti haina kukuvara.
4. Muchina unofanirwa kubatwa zvine hungwaru uye haufanire kukanganiswa nesimba rekunze.
5. Kana muchina wabuda mushando, unofanirwa kuiswa munzvimbo ine mweya uye yakaoma.
6. Paunenge uchichenesa muchina, ndapota pukuta nejira nyoro rine mvura kana kwazvakarerekera sipo. Zvinorambidzwa zvachose kunyudza mainjini musoro mumvura yekuchenesa. Usashandise sipo inoparadza senge peturu uye mvura yebhanana, kana kuti goko rinotsemuka
7. Usaise muchina mukuenderera unoshanda mamiriro kwenguva yakareba. Ndokumbira utonge inoramba ichishanda nguva mukati maawa maviri, zvikasadaro zvinokanganisa hupenyu hwebasa remuchina.
8. Kana mudziyo wekutsvaira uchinge washandiswa kwenguva yakareba, iyo yekukweva inoderera nekuda kwekuvharika kweiyo mesh yefirita skrini. Kuitira kudzivirira kudonha kwekudonha, firita chidzitiro uye bhegi rejira rinofanira kucheneswa nguva dzose nemvura, uyezve ndokuomeswa munzvimbo inotonhorera kuti ushandisezve kudzoreredza kukwezva.
9. Kana mainjini ichipisa, ichipa hwema hunopisa, kana ine vibration isina kujairika uye kurira, inofanira kutumirwa kunogadziriswa munguva, kwete kumanikidzwa kushandisa.
10. Usapeta pombi kazhinji, usapfuure kutambanudza nekukotama.
11. Nzvimbo yemuchina wekutsvaira haifanire kuiswa munzvimbo ine hunyoro kana inokanganisa kusvika pazvinogoneka, uye nzvimbo ine mhepo yekufema yakaoma inofanira kusarudzwa kudzivirira kukuvara kwemuviri
Mushure mekuunzwa kweXiaobian, isu tinofanirwa kuziva kuchenesa iyo yekutsuka.